Tallaabooyin uu Trump ciqaab ku muteysan karo haddii uu Iiraan weeraro | Salaan Media
Tallaabooyin uu Trump ciqaab ku muteysan karo haddii uu Iiraan weeraro
Dhismaha Naqsh-e Jahan Square, oo ku yaalla magaalada Isfahan, wuxuu ka mid yahay xarumaha dhaqanka ee ay Unesco ku leedahay Iiraan
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmaya cambaareyn sii kordheysa oo ku saabsan hanjabaaddii uu ku sheegay inuu weerari doono xarumaha dhaqanka ee dalka Iiraan.
Mr Trump ayaa hanjabaaddaas jeediyay ka dib markii ay xiisad ka dhalatay duqeyntii ay Mareykanka ku dileen taliyihii u dhashay Iiraan ee lagu magacaabi jiray Qasem Soleimani.
Madaxweyna ayaa sheegay in xarumaha dhaqanka ay ka mid yihiin 52 goobood oo uu Mareykanku ka calaamadeystay “haddii ay Iiraan waxyeello gaarsiiso muwaadiniinta Mareykanka u dhashay”.
Hase ahaatee waaxda dhinaca dhaqanka u qaabilsan Qaramada Midoobay iyo wasaaradda arimaha dibadda ee UK ayaa ka mid ah dhinacyada sheegay in goobaha noocaas ah aan la waxyeelleynin.
Dalalka Mareykanka iyo Iiraan ayaa wada saxiixay heshiiska Qaramada Midoobay ee ilaalinta goobaha hiddaha iyo dhaqanka, xitaa haddii uu dagaal socdo.
Sidoo kale weerarrada milatari ee ka dhanka ah xarumaha ganacsiga ayaa loo arkaa dambi dagaal, sida uu qabo sharciga caalamiga ah.
Trump ayaa ciqaab muteysan kara haddii uu tallaabo noocaas ah ka qaado Iiraan. Madaxweyneyaal horay xilal u soo qabtay ayaa la hor geeyay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka, iyagoo loo heysto dambiyo ay galeen oo ka soo horjeeday xeerarka dagaal ee caalamiga ah.
Walaac xoogan ayaa laga muujinayaa in dilkii Qasem Soleimani uu sababo dagaal ka dhex qarxa Iiraan iyo Mareykanka.
Soleimani, oo taageero weyn ka heystay dowladda iyo Shacabka reer Iiraan ayaa Jimcadii lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku ka fuliyeen magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Dilkiisu wuxuu huriyay xiisad ka taagan gobolka bariga dhexe, iyadoo Iiraan ay ku hanjabtay “inay aargudasho weyn ka sameyn doonto arrintaas”.
Isjiiritaan ka dhacay aaskii loo sameynayay, oo ay dad aad u badan ka qeyb galayeen waxaa ku dhintay ku dhawaad 60 ruux.
Mareykanka ayaa difaacay dilka ninkan, waxayna sheegeen inaysan u dulqaadan doonin “tallaabo khaldan” oo ay Iiraan qaaddo.
Maxay ahaayeen hanjabaadaha madaxweyne Trump?
Hanjabaadihii ugu horreeyay wuxuu madaxweyne Trump ku jeediyay qoraallo isdabajoog ahaa oo uu Sabtidii soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Mr Trump wuxuu sheegay in Mareykanku uu asteystay 52 goobood oo Iiraan ku yaalla, kuwaasoo qaarkood “uu heerkoodu aad u sarreeyo, muhiimad weynna ugu fadhiyaan dhaqanka Iiraan”. Wuxuu ku gooddiyay in sida ugu dhakhsiyaha badan loo duqeyn doono, burbur xog lehna loo geysan doono haddii ay Iiraan tallaabo aargoosi ah u qaaddo dhinaca Mareykanka.
Xog hayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa u muuqday inuu khfiifinayay hanjabaaddaas, isagoo sheegay in Mareykanku uu Iiraan ka qaadi doono tallaabo sharciga caalamiga ah waafaqsan.
Laakiin madaxweyne Trump ayaa mar kale ku celiyay hanjabaaddiisa, oo uu ku adkeystay, wuxuuna yiri: “Iyaga waa loo oggol yahay inay dilaan dadkeenna, waa loo oggol yahay inay jirdil ku sameeyaan dadkeenna, waa loo oggol yahay inay isticmaalaan miinooyinka waddada dhinaceeda lagu aaso, waa loo oggol yahay inay dadkeenna qarxiyaan – annagana ma naloo oggola inaan taabanno dhaqankooda miyaa? arrintaasi ma shaqeyneyso”.
Maxay tahay cambaareynta uu soo jiitay hadalkaas?
Agaasimaha guud ee hay’adda arrimaha dhaqanka u qaabilsan Qaramada Midoobay ee Unesco, Audrey Azoulay, ayaa sheegay in Iiraan iyo Mareykanka ay labaduba saxiixeen heshiiskii 1972-kii ee ilaalinta xarumaha dhaqanka iyo waxyaabaha dabiiciga ah.
Waxay labada dalba sidoo kale saxiixeen heshiiskii 1954-kii ee dhigayay in la ilaaliyo goobaha dhaqanka, haddii uu dagaal dhaco.
Mr Trump ayaa sanadkii 2018-kii Mareykanka ka saaray heshiisyada hay’adda Unesco, isagoo sababtana ku tilmaamay eedeymo loogu jeedinayay inuu u eexday Israel.
Hanjabaadda xarumaha dhaqanka Iiraan ee Trump waxay mideysay dadka reer Iiraan
Waxaa qormadan sameeyay Sam Farzaneh, oo ka tirsan laanta BBC Persian
Islamarkii la shaaciyay warka ku saabsan dilka Qasem Soleimani, dadka reer Iiraan way kala qeybsanaayeen. Qaarkood way ka xumaadeen dhimashadiisa, qaarna way u dabaal dageen in la dilay, iyagoo dareenkooda kala duwan ku muujinayay baraha bulshada.
Laakiin markii uu madaxweyne Donald Trump bartiisa Twitter-ka kusoo qoray hanjabaadda ku aaddan inuu bartilmaameedsan doono goobaha dhaqanka caanka ku ah ee Iiraan, waxaa si mideysan uga soo horjeestay dadka Iiraaniyiinta ah oo dhan.
Qaar ka mid ah xarumaha loo hanjabay waa kuwo diimeed, kuwo kalena diin lama xiriiraan, laakiin dadka reer Iiraan ee diimaha kala duwan heysta waxay dhammaantood jecel yihiin dhaqankooda, waxayna cambaareeyeen hadalka kasoo yeeray Trump.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo arrintaas ka faa’iideysanayay ayaa isbarbar dhig ku sameeyay kooxda dowladda Islaamiga ee IS, oo burburisay xarumo dhaqan oo ay lahayd Suuriya.
Xarumaha ugu waaweyn ee dhaqanka Iiraan
Iiraan waxay hoy u tahay in ka badan 20 xarumood oo ay maamusho hay’adda dhaqanka iyo hiddaha Unesco ee hoos tagta Qaramada Midoobay.
Persepolis, waa caasimadda dadkii beershiyaanka ahaa ee hore iyo boqortooyadii Achaemenid.
Xaruntan waxay taariikh ahaan soo jirtay xilli ka horreeyay qarnigii 6-aad.
Naqsh-e Jahan Square, oo ku taalla magaalada Isfahan, waxaa la dhisay horaantii qarnigii 17-aad, waana mid ka mid ah fagaareyaasha ugu waaweyn ee ku yaalla magaalooyinka caalamka.
Qasriga Golestan, oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Tehran, waxay xarun u ahayd boqortooyadii Qajar dynasty oo Iiraan xukumeysay intii u dhaxeysay 1785 ilaa 1925
Waxaa kale oo jira goobo kale – oo aan liiska ugu jirin hay’adda Unesco – laakiin muhiimad weyn oo dhinaca dhaqanka u ah dalka Iiraan.